Sidina USA-Sina mandritra ny virus coronavirus? Vahaolana Rosiana?
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Sidina USA-Sina mandritra ny virus coronavirus? Vahaolana Rosiana?
Aeroflot an'i Russia hanangana sidina vaovao Goa, Mumbai, Chengdu, Osaka ary Singapore
Ity drafitra Rosiana Marshall ity dia mety hampiala ny Amerikanina any China rehefa avy nanambara ny fanafoanana ny sidina rehetra avy any Etazonia mankany Shina ny United Airlines, American Airlines, Delta Airlines. Sidina maro hafa no manafoana avy amin'ny vazan'izao tontolo izao, saingy misy izany Aeroflot.
Ny amerikanina sy ny mpandeha avy any Afrika mankany Eropa dia mikoropaka hiala ao Shina taorian'ny namoahan'ny Etazonia fampitandremana momba ny dia mahery vaika azo natao hamelezana ny Repoblikan'ny Vahoaka. Nanaraka izany ny mpanolotsaina momba ny dia avy amin'ny governemanta manerantany.
China Eastern Airlines avy any am-bavahadin'i Etazonia, anisan'izany i Honolulu dia mbola miasa ara-dalàna mitondra mpizahatany mankany Aloha Fanjakana, fa inona no azon'ny Amerikanina sy sinoa atao raha tokony hody izy ireo ary tsy mandeha intsony ny sidina? ny Coronavirus lasa fampitahorana manerantany ary manelingelina ny sidina sy ny fizahantany izao.
Hatreto dia misy ny safidy.
Nafindran'ny Rosiana Aeroflot ny fiasan'ny sidina manontolo an'i Sina ho any amin'ny terminal F ao amin'ny seranam-piaramanidina Sheremetyevo ao Moskoa, mba hahafahana mijery tsara kokoa ny mpandeha ary tafasaraka amin'ireo vahiny hafa.
Mandritra izany fotoana izany dia miasa ny sidina avy any Moskoa mankany Beijing, Hong Kong, Guangzhou, ary Shanghai.
Miaraka amin'ny tamba-jotra lehibe mampifandray amin'ireo vavahady US izay misy an'i New York sy Los Angeles, ary amin'ireo vavahady maro hafa amin'ny alàlan'ny Amsterdam ao amin'ny Skyteam system, Aeroflot dia varavarana ambadiky ny US.
Ny olom-pirenena amerikana sy eropeana mifandray amin'i Moskoa dia tsy mila visa rosiana hivezivezy.
Ffahazavana Fantsona misy ankehitriny Terminal vaovao Fanamarihana
SU 200 Mosko - Beijing D F Terminal vaovao
SU 201 Beijing - Moskoa D F Terminal vaovao
SU 204 Mosko - Beijing D F Terminal vaovao
SU 205 Beijing - Moskoa D F Terminal vaovao
SU 212 Mosko - Hong Kong F F Tsy misy fiovana
SU 213 Hong Kong - Moskoa F F Tsy misy fiovana
SU 220 Mosco - Guangzhou F F Tsy misy fiovana
SU 221 Guangzhou - Moskoa F F Tsy misy fiovana
SU 206 Mosko - Shanghai F F Tsy misy fiovana
SU 207 Shanghai - Moskoa D F Terminal vaovao
SU 208 Mosko - Shanghai F F Tsy misy fiovana
SU 209 Shanghai - Moskoa D F Terminal vaovao